पीएसएलः सन्दीप आवद्ध लाहोरले पायो २३९ रनको लक्ष्य ! - Everest Dainik - News from Nepal
पीएसएलः सन्दीप आवद्ध लाहोरले पायो २३९ रनको लक्ष्य !
काठमाडौं, फागुन २५ । पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) अन्तर्गत इश्लामाबाद युनाइटेडले सन्दीपल लामिछाने आवद्ध लाहोर कलन्दर्सलाई २३९ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको इश्लामाबादले निर्धारित २० ओभरमा ३ विकेट गुमाउँदै २३८ रन बनायो ।
उसका लागि क्यामरन डेलपर्टले नटआउट ११७, चाणविक वाल्टनले ४८, आशिफ अलिले नटआउट ५५ रन बनाए । बलिङमा लाहोरका सन्दीप लामिछाने, शाहिन शाह अफ्रिदी र डेभिड विइसीले एक-एक विकेट लिए ।
प्लेअफमा पुग्नका लागि सन्दीपको टिमलाई आजको खेल जित्नै पर्ने दबाब छ । यदि इश्लामाबादसँगको खेल हारेमा लाहोरको अगाडिको यात्रा लगभग समाप्त हुनेछ । अहिले सन्दीपको टिम अंक तालिकामा पाँचौं स्थानमा छ ।
उसले ८ खेलमा ५ मा हार र ३ खेलमा मात्र जित निकाल्न सफल भएको छ । इश्लामावाद भने ९ खेलमा ४ मा जित र ५ मा हार बेहोर्दै अंक तालिकामा तेस्रो स्थानमा छ । यी दुई टिमबीच अहिलेसम्म ५ पटक भिडन्त भएको छ । जसमा २ मा लाहोर र २ खेलमै इश्लामाबाद विजयी भएको छ । एक खेल भने टाई भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस विश्व-११ वेष्ट इन्डिजसँग पराजित, सन्दीपले एक ओभर मात्रै बलिङ गर्न पाए